Sidee baan u bedeli karaan File MKV An?
> Resource > Video > talinayo Software si loogu badalo File MKV An
Inkastoo file MKV ah aad uula mid tahay AVI ah, laakiin waxaa ku jiri kara kala duwan oo guud ahaan ka mid ah codec (gaar ahaan kuwa caan ah sida H.264, AAC iyo Vorbis). Waxa ay sidoo kale si deg deg ah helo caan ah sida mid ka mid ah foomamka caadiga ah ama caadiga ah ee weelka file multimedia ee. Si kastaba ha ahaatee, waa kuwo ku adag in la helo ciyaaryahan taasi ay awoodaan in ay Radidiyaha waxyaabaha ku jira faylka MKV ah, ha keliya qalabka naga qaadi karo. Sidaas, ma ahan la yaab leh oo dhan haddii aad la keeneen in fariin qalad ah ee isku dayga aad u geliyaan file MKV ah.
Waxaad u baahan doontaa in loogu badalo files MKV aad ka hor in, laakiin waxa uu noqon doono fursada ugu wanaagsan inkastoo? Aad online ah ama iyada oo loo marayo Converter desktop ah loogu badalo waxaa habboon? Fiiri Liiska Online Video converters heli karo. Haddii aad raadineyso weeyna muuqaalada dheeraad ah, isku day in aad soo Wondershare Video Converter Ultimate . Waa socon u download labada nidaamka Windows iyo Mac ka hawlgala.
Si fudud u akhri tilmaamaha tallaabo-tallaabo ku saabsan sida aad u bedeli karaan faylasha MKV aad sidaas darteed waa socon for loo maqli karo iyadoo aad doorato qalabka la qaadi karo.
1 Import ama geliyaan files
Waxaad sidoo kale riixi kartaa ah + dar Files (by Author iyada oo aad fayl deegaanka) ama jiidi-iyo-hoos u faylasha aad si toos ah interface ugu weyn. The files uploaded la hir abaabulay doonaa oo ku duceysanayaan ilaa meesha ugu sareysa kasta oo kale.
Features dheeraad ah : Waxaad kaloo dooran kartaa in aad ku shuban DVD haddii aad rabto inaad la abuuro nuqul raad raac ah (sidoo kale softcopy ama hardcopy) ama gubi faylasha aad u gal DVD ah. Waxaa sidoo kale jira naf dhibkeed marto dhisay-in si aad shakhsiyeeyo kartaa menu u gaar ah.
2 files Edit
Waa asal ahaan doorasho kama dambaysta ah dhexdooda video ah converters heli karaa! Kale badan iyagoo si loogu badalo files awood, aad nuqul karo ama gubi DVD. Waa maxay dheeraad ah? Waxaa jira video ah editor dhisay-in aad sahlo. Just guji Edit in noola, jar ama sameeyo wax kasta oo aad u baahan tahay videos ka hor diinta.
The qaabab wax soo saarka oo ay taageerayaan loo asteeyey galay jecel , Qaabka iyo Device . Si fudud waxaad ku isticmaali kartaa iyada oo ay doortaan qaab saarka in aad rabto in aad ka. Tusaale ahaan; waxaad dooran kartaa brand iyo model ee qalabka la qaadi karo si toos ah sida ku cad shaashadda hoose.
4 Dheellitir goobaha
Goobaha ay si toos ah ayaa lagu wadaa in ay default ah oo lagula talinayaa faylasha aad. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waa in aad qabsato karaa gacanta adigoo gujinaya ku Settings . Waxaad gacanta ka bedeli kartaa koobin ahayd in la faylasha aad. Marka sameeyo, guji Beddelaan ! Ceshano faylasha aad badaley mar fariin dhamaystirka soo booda aad shaashadda.
Fiiro gaar ah : Waxaa jira dheeraad Download tab on sare ee interface ugu weyn ee meesha aad ka soo goobaha geeyo online soo bixi kartaa clips aad ugu jeceshahay.